किन गर्नु पर्छ मर्निङ वाक ? यस्ता छन् फाइदा - DURBAR TIMES
HomeHealthकिन गर्नु पर्छ मर्निङ वाक ? यस्ता छन् फाइदा
किन गर्नु पर्छ मर्निङ वाक ? यस्ता छन् फाइदा
कब्जियत, एसिडिटी र अपच जस्ता समस्या भएकाहरूले दिनको २० मिनेट अवश्य हिँड्नुपर्छ । भोजन गरेपछि पनि १० मिनेट हिँड्ने गर्नुस् । यसो गर्दा पेटको समस्या आउँदैन ।एजेन्सी
Previous articleगण्डकी प्रदेश विशेष खबर २०७७-०६-१४ (७ दिन ७ प्रदेश) | बुधबार
Next articleनिशान भट्टराईको नयाँ गीत